အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ၄၅ ဦး ကော်မတီက ပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်း နှစ်ရပ်ကို ဒီကနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကို တင်သွင်းရာမှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်နိုင်တဲ့ အာဏာကို လျှော့ချတဲ့အချက်တွေနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ လွှတ်တော်မှာ အလိုအလျောက်နေရာရမှုကို တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချနိုင်မယ့် အချက်တွေ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အားလုံး၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မ (၂၀) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ကို ပယ်ဖျက်ဖို့ဆိုတဲ့ အချက် ပါဝင်ပါတယ်။
အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ( ၄၀ ) ပုဒ်မခွဲ ( ဂ ) မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လာရင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နိုင်ငံတော်အာဏာကို အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီ ရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိတယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
ကော်မတီက အဲဒီအချက်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး “အရေးပေါ် အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် နိုင်ငံတော်အာဏာကို နိုင်ငံတော် သမ္မတက ဦးဆောင်၍ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်အား အတည်ပြု ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ရမည်” လို့ အစားထိုးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ် အများစုပါဝင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပူးပါင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် အပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၅၁ ဦး လက်မှတ်နဲ့ ဥပဒေမူကြမ်း နှစ်ရပ်ကို တင်ပြထားကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက က ဒီနေ့ အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပူးပါင်းကော်မတီက တင်ပြတဲ့ ဥပဒေမူကြမ်း နှစ်ခု၊ တပ်မတော်နဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ တင်ပြထားတဲ့ မူကြမ်း ငါးခု၊ စုစုပေါင်း ပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်း ခုနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်တည်း ဆွေးနွေးဖို့ လေ့လာစိစစ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီကိုလည်း ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ လေ့လာစိစစ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏစိုးက ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတဲ့ အချက်တွေ ဥပဒေမူကြမ်းမှာ ပါဝင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတ နှစ်ဦး၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတွေ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး စတဲ့ တာဝန်ရှိသူ ၁၁ ဦးပါဝင်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း ၅ ဟာ အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးပါ ကာလုံအဖွဲ့မှာ တပ်မတော်နဲ့ သက်ဆိုင်သူက ခြောက်ဦး၊ အရပ်ဘက်က ငါးဦးသာ ပါဝင်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုပြီး ပြင်ဆင်ဖို့ တင်ပြတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ တင်ပြတဲ့ ပြင်ဆင်ရေး မူကြမ်းထဲမှာ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကို ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ အဖြစ်ကနေ ပယ်ဖျယ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦးကို ကာလုံထဲမှာ ထည့်သွင်းဖို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက် အဲဒီမူကြမ်းအရ အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦးအထိ ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကို ဖျက်သိမ်းဖို့အထိ တင်ပြတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတအဖြစ် တာဝန်မယူနိုင်ဖို့ ပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုပြီး ယူဆနေကြတဲ့ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ကိုလည်း ပယ်ဖျက်ဖို့ ပါဝင်ပါတယ်။
တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် လွှတ်တော်အပါအဝင် အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ပါဝင်တဲ့ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်ကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချသွားဖို့ တင်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိ လွှတ်တော်ဟာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် လာမယ့် တတိယအကြိမ်မှာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်ကို ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ၊ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်မှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ၊ ပဉ္စမအကြိမ်မှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ချဖို့ အချက်ပါဝင်ပါတယ်။
အရပ်ဘက် စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးအရ လွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ရာခိုင်နှုန်း ငါးရာခိုင်နှုန်း ကတော့ ဆက်ပြီးရှိနေသင့်တယ်လို့ အများက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏစိုးက ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်သား ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးထက်ဝင်းက လွှတ်တော်ကို တင်ပြလာတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပူးပါင်းကော်မတီရဲ့ ဥပဒေမူကြမ်း နှစ်ခုဟာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ သဘောထား လုံး၀ မပါဝင်ဘူးလို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
အဲဒီ ဥပဒေမူကြမ်း နှစ်ခုကို တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်က သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ကာလုံကို ပြင်ဆင်ဖို့ အပါအဝင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကို လျှော့ချဖို့ စတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်လာတဲ့အပေါ် လက်ရှိအချိန်မှာ မှတ်ချက်ပြုဖို့ မရှိသေးဘဲ လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်လာရင်တော့ ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးထက်ဝင်း က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ဆွေးနွေးတဲ့အခါ ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ အချက်တွေရှိလာရင်တော့ တပ်မတော်ဘက်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ လွှတ်တော်ကို တင်ပြလာတဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းတွေထဲမှာ ပုဒ်မ ၄၃၆ ( က ) ( ခ) ပြင်ဆင်ရေးလည်း ပါဝင်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် သုံးပုံ နှစ်ပုံက ဥပဒေပုဒ်မ တစ်ခုကို ပြင်ဆင်ဖို့ သဘောတူရင် ပြင်ဆင်နိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိတည်ဆဲဖြစ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း ၁၂ မှာပါတဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ (က) အရ ပုဒ်မတွေကို ပြင်ဆင်လိုရင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရုံနဲ့ မရသေးဘဲ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ပုဒ်မ ၄၃၆ (ခ)မှာ ပြဌာန်းချက်အရ တချို့ပုဒ်မတွေကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က သဘောတူရင် ပြင်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။
၄၅ ဦးကော်မတီက တင်ပြတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကို RFA ကို မေးမြန်းဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် အဆက်အသွယ် မရခဲ့ပါဘူး။
ရန်ကုန်မြို့က တိုင်းရင်းသားအရေး၊ နိုင်ငံရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးက ၄၅ ဦး ကော်မတီရဲ့ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး မူကြမ်းပါ ပြင်ဆင်ချက်တွေက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ ရှိသင့်တဲ့ အချက်တွေကို လူထုကို ချပြတယ်လို့ မြင်ကြောင်း သုံးသပ်ပါတယ်။
“ပြင်ဆင်ဖို့ကို တပ်မတော်က လက်ရှိအနေအထားအရ လက်ခံနိုင်ဖို့ အလားအလာ မရှိပါဘူး” လို့ ဦးမောင်မောင်စိုးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
လွှတ်တော် လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပွင့်လင်းမြန်မာရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ OMI အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးအေးကျော်ကို ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေမူကြမ်း ခုနှစ်ခုကို လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ လေ့လာစိစစ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီကို ဒီနေ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အဲဒီကော်မတီက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
The world is unfair. How couldapit bull release it's bite of steak ?. How couldaperson living comfortably inanice home with nice food and SUV, give up his life style. Besides, it is not cool to return to the barracks in time of mounting ethnic uprising, they solely and carefully have brewed. Even their comfortable home is no longeraguarantee. What goes around can come around.
Mar 07, 2020 05:17 PM